A Better Understanding of Kitchen Faucet Styles - Best Kitchen Faucets 2021 | Best Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
Ikhaya / Blog / Ukuqondwa okungcono kweZitayile zeFace yaseKitchen
2020 / 10 / 28 uhleloBlog 4595 0
Ikhitshi ligumbi kwipropathi yakho. Phakathi kokucoca ukupheka, kunye neendwendwe zokuzonwabisa, uya kufumanisa ukuba izinto eziluncedo zibalulekile kwimpumelelo ekhitshini. Ngaphandle kokungagxili kugxilwe ngabambalwa, indima ebalulekileyo yompompo ekhitshini iyenza ukuba ibe phakathi kwezona zinto zibalulekileyo kwigumbi. Kubaluleke kakhulu ukuqonda iimfuno zakho kunye nendawo ekhoyo ekhitshini lakho.
Ukuhlala kunye nokuthembeka kudibana kunye nezitayile ezifashisayo kuluhlu olukhulu. Ukusuka kwiitepu zesitayile ezintle okanye iipompo zasekhitshini zangoku, kuyakubakho into yokuxuba kunye nokudibanisa izinto zokuhombisa zekhaya lakho.
Ukuphathwa okukodwa kweepompo zasekhitshini yenye yezinto ezilula. Zizinto ezinokulungiswa, ezinemibane ebandayo kwaye eshushu kunye namanzi ashushu konke kube kanye. Oku kuyakukhulula indawo ekhitshini lakho, kwaye kufuna umngxunya omnye kwisinki okanye kwikhawuntala ephezulu. Kulula ukucoca, kwaye kulula ukulungelelanisa ubushushu bamanzi kunye noxinzelelo, ezi mpompo ziyamangalisa. Ezinye iimpompo zokubamba ezizodwa ziza. Jonga iipompu zokuphatha ezizodwa kwisitayile kunye nokugqitywa kokukhetha kwakho.
Zombini ziphethe isinki yetephu yekhitshi: ezimbini ukuya kwenye zokuphulula itepu yakho kunye nezilinganisi zakho okanye uya kufuna ubuncinci imingxunya emithathu ngaphezulu. Uninzi lweepompo zekhitshi ezimbini zenziwe ngobugcisa kusetyenziswa ujongo; Nangona kunjalo, abavelisi abaninzi baya kubonelela ngeempompo zokuphatha zangoku, zemveli, okanye zenguqu.
Into oyithandayo ngalo lonke ixesha ngumbhobho wakho wokukhupha ikhitshi. Oku akunasiphelo ekhitshini laseMelika. Ungafumanisa ukuba le yeyona faucet ifanelekileyo nefanelekileyo. Inkuthazo enomdla, eli qhekeza linobuchule bokucoca kunye nokucoca amandla okuguquguquka, kunye nokuhambelana kwayo, kunye nethumbu elibuyisekayo. Ngoku zama esi siqwenga, kwaye usifumene senziwe phantse nasiphi na isitayile kwaye phantse nakuphi na ukugqiba kokukhetha kwakho.
Iimpompo zodonga olusisigxina ziyindlela ekhethekileyo ekhitshini lakho. Ezi zibonda zifuna ukufumaneka kwemibhobho yamanzi ukuze ifakwe ekhitshini lakho. Bangena kugqityiwe kunye nezitayile eziza kuxubeka kwaye zitshatise izixhobo zakho zasekhitshini kunye nezixhobo. Iipompo zokufaka izimbiza zisetyenziswa njengendawo yokuhambisa amanzi ebandayo evela esitovini kwaye kufanelekile ukuba incedisa itepu yesinki yasekhitshini; zilungele ukuzalisa iibhasikiti ngamanzi! Iipompo zebar zokuncedisa isinki sakho seebar ziza ngezitayile okanye iimodeli ezincitshisiweyo zokunxibelelana nompompo wakho wasekhitshini. Ukuba ujonge ukufumana matte emnyama tsala phantsi umpompo wasekhitshini. undwendwele apha.
Ngaphambili :: Ukukhetha iKhitshi ukukhupha i-Faucet next: Ungazikhetha njani ezona mpompo zeKhitshi